‘मिल्क एनालाइजर’ नहुँदा जाँच नभएरै भारतबाट दूध आयात – Satyapati
‘मिल्क एनालाइजर’ नहुँदा जाँच नभएरै भारतबाट दूध आयात
बाँके । भारतबाट नेपालगन्जमा दिनमा कति लिटर दूध आउँछ र त्यो दूध कत्तिको गुणस्तरीय होला ? यो प्रश्नको जवाफ कोहीसँग छैन । भारतबाट आउने दूधको गुणस्तर जाँच्न नाकामा क्वारेन्टाइन कार्यालय राखिएको छ । कार्यालयसँग दूधको गुणस्तरीय जाँच्ने उपकरण नहुँदा भारतबाट मनोमानी तरिकाले दूध भित्रिरहेको हो ।
क्वारेन्टाइन नेपालगन्जका प्रमुख डा.शितलबाबु श्रेष्ठले भारतबाट जाँच नभई दूध भित्रिरहेको बताए । ‘दूधको गुणस्तरीय जाँच्न हामीलाई मिल्क एनालाइजर चाहिन्छ । त्यो हामीसँग छैन,’ क्वारेन्टाइन प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘हामीसँग ल्याक्टोमिटर छ । त्यो पनि भरपर्दो छैन ।’ क्वारेन्टाइन प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार, अहिले भारतबाट भित्रिने दूध बिना जाँच घरघरमा पुग्ने गरेको छ ।
कार्यालयसँग दूध जाँच्ने उपकरण नभएकाले व्यवसायीले पनि त्यहाँ सम्पर्क नगरेर सोझै घरघरमा दूध पुर्याइरहेका छन् । भारतबाट भित्रिने दूधको गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गर्दछ । नाकामा सशस्त्र प्रहरीले पनि दूधको गुणस्तरीयता जाँचेर मात्रै भित्र्याउन केही दिनदेखि भारतीय व्यवसायीलाई सम्झाउने काम गरिरहेको छ ।
क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसार, नेपालगन्ज नाकाबाट दैनिक एक हजार ३०० सय लिटर दूध भारतबाट आयात भइरहेको छ । भारतबाट भित्रिने दूध बजारको घरघरमा पुग्नुका साथै रावडी, दही बनाउन प्रयोग भइरहेको छ । भारतबाट भित्रिने गुणस्तरहीन दूधबाट बनेका परिकार खाना कत्तिको उपयुक्त होला ? खाद्य अधिकार र उपभोक्ता हितका कुरा गर्नेहरुले बुझ्न सकेका छैनन् ।
नेपाली दूध व्यवसायीहरुले भारतबाट भित्रिने दूध गुणस्तरहीन हुने गरेको दावी गर्छन् । मनिकापुरका आज्ञाराम महतो र होलियाका विश्राम यादवले भारतबाट भित्रिने दूधलाई राम्ररी जाँच गरेर मात्रै भित्रिन दिनुपर्ने बताए । उनीहरुले जथाभावी रुपमा भित्रिने भारतीय दूध बन्द गर्नुपर्ने बताए । महतो मनिकापुरबाट दैनिक ४० लिटर दूध बोकेर नेपालगन्ज आउँछन् । घरघरमा ठेक्कामा दूध बेचेर फर्किन्छन् ।
होलियाका यादव पनि दैनिक ६० लिटर दूध बोकेर नेपालगन्ज आउँछन् । र, घरघरमा दिएर जान्छन् । महतोले ७ वटा र विश्रामले चार वटा भैसी पालेका छन् । महतो र यादवले आफूहरुले ल्याउने दूध गुणस्तरीय हुने दावी गरे । सीमावर्ती जिल्ला भएकाले बाँकेमा भारतबाट दूध भित्रिने गर्दछ । राप्तीपारीका केही गाउँबाट नेपाली दूधसमेत भारततिर जाने गर्दछ ।
सीमावर्ती जिल्ला भएकाले उताको यता र यताको उता दूध जानु स्वभाविकै भएपनि जाँच गरेर भित्रिन दिनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दूधको गुणस्तर जाँच नभई भित्रिन दिनु र क्वारेन्टाइन कार्यालय भएर पनि दूधको गुणस्तरीय जाँच गर्ने उपकरण नहुनु लाजमर्दो भएको सम्बद्धहरु बताउँछन् ।